Nkwalite Onyinye Aka Aka Na-agbanye chaja ekwentị China Manufacturer
Nkọwa:Aka na-ekpo ọkụ maka Nkwado,Ọkụ aka na-ekpo ọkụ,Akwụsara aka ọkụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Sistem Na-ekpocha Ụlọ Ala Seram > Nkwalite Onyinye Aka Aka Na-agbanye chaja ekwentị
Ihe Nlereanya.: XHC-L060B
Nwere aka oyi na oyi? Ọ dị mkpa ka ị nwetaghachi mmetụta ahụ n'aka gị? Chọpụta ihe ngwọta gị n'okpuru.
Ọkụ aka anyị nwere ike ịme ihe ga-ejide mkpịsị aka gị, ọbụna n'oge oyi. Ma ịchọrọ ka ọkụ eletrik dị ọkụ, e nwere ihe anyị nwere ike inye gị ezigbo ọkụ ọkụ aka nke ga-eme ka ego gị na mkpa gị. Ekwela ka ogwe aka na-emebi ihe ị na-eme n'èzí n'èzí. Ndị a na-ere ọkụ na-efu ego bụ oke nhọrọ .
Anyị n'aka ọkụ mejupụtara anya infrared kpo oku film nke a maara dị ka nkà na ụzụ ọhụrụ nke kpo oku elements.It emmitted anya infrared radieshon nke nwere ike banye n'ime miri n'ime ahụ mmadụ na-eji nwayọọ ibuli ya okpomọkụ, optimizing ya physiotherapeutic uru. Tụkwasị na nke a, ihe nkiri a kpochapụrụ nke ọma na-eji ike karịa ike karịa ndị omenala.
Nwere ike iji dị ka oyi oyi ngwọta maka aka warimg
Enwere ike iji ya dị ka chaja ekwentị, IPHONE, SAMSUNG wdg. Dị
2.Akwado ụlọ, akụkụ abụọ na-enwu ọkụ.
3.1.2mUSB cabler, nwekwara ike na chaja ma ọ bụ na-enweghị
4.1800Mah maka ọrụ batrị na-arụ ọrụ 3 awa
5.Ọ dị irè na-eme ka aka gị dị ọkụ n'oge oyi
6.Ndị na-egosi ike
7.Iji iji akụ akụ, IPHONE, SAMSUNG wdg. Dị
8.Ọdịdị njikwa okpomọkụ nke 40-48 na-enye arụ ọrụ okpomoku ka mma.
9. A na-eji batrị lithium nwere ike ịbanye n'ime ya karịa ugboro 500.
10. Ụdị agwa aha dị.
11. Ebumnobi mbụ (nke a ma ama)
150w AC220V 750 * 750mm underfloor heat mats Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá ụgbọ ala infrared nke ukwuu na-ekpo ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
50W / M Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Agha Kpọtụrụ ugbu a
Aka na-ekpo ọkụ maka Nkwado Ọkụ aka na-ekpo ọkụ Akwụsara aka ọkụ Aka na-ekpo ọkụ aka Ihe na-ekpo ọkụ maka Ntanye Nkịtị na-ekpo ọkụ maka nwa ogwu Ihe na-ekpo ọkụ maka Tile Nkume na-ekpo ọkụ maka Japanese